ORBEL Waxay Ku Dhawaaqday Qiimaha Macallimiinta | RayHaber
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52ORBEL Waxay Siisaa Wanaagsan Macallimiinta
21 / 11 / 2019 Ciidamada 52, GUUD, Gondola, Gobolka Banaadir, Headline, TURKEY, TELPHER
Laga bilaabo macallimiinta laf-dhabarta ah ilaa baabuurka fiilada ka soo horjeedda ee guriga ka soo baxa iyo wararka dhimis dhimista ee khiyaamada
Sicir-dhimis Injiilka laga helayo Macallimiinta ilaa ORBEL; Kalkaaliyaha Dawladda Hoose ee Magaalada OrBEL A.Ş. 24 wuxuu cadeeyay inay jiri doonaan qiimo dhimis 50% Xarunta Cable Car Facility, Reverse House iyo Adventure Park maalinta macalimiinta ee Nofembar.
Waqti ka waqti, oo ololeheeda ka wado aagagga uu u shaqeeyo, ORBEL A.Ş. Ololaha ardayda dhowaan kadib, wuxuu sidoo kale soo bandhigi doonaa qiimo dhimis macallimiinta lafta asaaska u ah mustaqbalka dalka.
Kulankii lagu qabtay 15.10.2019, shirkadda waxaa lagu casuumay ORBEL A.Ş. waxay go’aansatay inay sicir-dhimis u sameyso 24% xarunta Teleferik Facility, Reverse House iyo Adventure Park.
24 Noofambar, macallimiinta ka faa'iideysan doona dhimista waxaa looga baahan yahay inay soo bandhigaan kaararka Aqoonsiga shaqaalahooda.